Amanoveli ayi-6 anokuthinta okumnyama nokwesabekayo okukhethwe ngoJulayi | Izincwadi Zamanje
Amanoveli ayi-6 anokuthinta okumnyama nokwesabekayo okukhethwe ngoJulayi
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Amabhuku, I-Novela, Inoveli emnyama, Ukwesaba
Julayi futhi. Ihlobo esinalo phambili mhlawumbe limpunga kakhulu noma limnyama futhi, kunoma yikuphi, lihlukile. Okungaguquki ukufunda, izincwadi ezihamba nathi noma ngabe yisiphi isikhathi sonyaka noma umbala wazo. Namuhla ngiletha lezi Amanoveli akhethiwe ayi-6 wethoni emnyama futhi ngamagama akudala afana no-Arthur I-Conan doyle exutshwe nabantu besikhathi esinjengoJussi U-Adler-Olsen, ecaleni lakhe lokugcina loMnyango Q elisethwe eBarcelona. Sibheka.
1 Ikheji Legolide - UCamilla Läckberg
2 Imithetho Yegazi —Stephen King
3 Ukubulawa kukaConcarneau - uJean-Luc Bannalec
4 Indodakazi Yesikhathi - UJosephine Tey
5 Enye i-canon kaSherlock Holmes - A. Conan Doyle nabanye
6 Isisulu 2117 - uJussi Adler-Olsen
Ikheji eligolide - UCamilla Läckberg
Ukulandela ngemuva kwalezi zikhathi nge abesifazane abalingiswa abasemqoka, umbhali waseSweden upaka uchungechunge lwakhe oluthi The Crimes of Fjällbacka olunalesi sihloko. Ukungabaza kwengqondo nge-protagonist echazwe njengokuthakazelisayo nokungaqondakali.
Ngomlando omnyama, uFaye uzuze konke abekade ekufuna: indoda ekhangayo, indodakazi futhi, ngaphezu kwakho konke, isikhundla esihle senhlalo nempilo egcwele ubukhazikhazi. Kepha ngobusuku obubodwa ukuthi impilo ephelele iyashintsha Ngokuphelele futhi uFaye uba ngowesifazane omusha ozimisele ngokuziphindiselela nokuziphindisela futhi egcwele izinsiza.
Igazi liyabusa -UStephen King
Lithini ihlobo ngaphandle kwezindaba ezimbalwa ezethusayo? Ngoba inkosi yokwesaba ihlangana lapha amanoveli amane amafushane. Iqoqo lokuthinta i-paranormal noir umlingisi ongumlingisi uHolly Gibney, ongomunye wabalingiswa abathandwa kakhulu ngabalandeli beKing.
En Igazi liyabusa UHolly Gibney uzobhekana nesibhicongo sase-Albert Macready High, okuyicala lakhe lokuqala elikhulu. Abanye abathathu yibo Ucingo lukaMnu Harrigan, ngobungani phakathi kwabantu ababili beminyaka ehluke kakhulu futhi obubekezelela ngendlela ephazamisa kakhulu; Impilo kaChuck, ngokucabanga ngobukhona bomunye nomunye wethu. Y Igundane, lapho umlobi ophelelwe yithemba kufanele abhekane nohlangothi olumnyama lwesifiso sokuvelela.
Ukubulawa kukaConcarneau - UJean-Luc Bannalec
Khumbula lokho UJean-Luc Bannalec igama-mbumbulu lomshicileli waseJalimane nomhumushi UJörg Bong. Futhi i-quirky, i-sullen ne-gourmet UKhomishani Dupin kuyindalo yakhe eyaziwa kakhulu. Lokhu okwakhe icala inombolo eyisishiyagalombili lapho kuzofanele uphenye ngokufa kukadokotela edolobheni laseConcarneau.
Indodakazi yesikhathi - UJosephine Tey
Kumlobi waseScotland uJosephine Tey, omsebenzi wakhe ungowalabo okuthiwa Amanoveli weGolden Age Yemfihlakalo, une kuqhathaniswa enamagama obugebengu asenganekwaneni afana noDorothy L. Sayers noma Agatha Christie.
Lesi sihloko esanyatheliswa ngo-1951 izinkanyezi futhiUmhloli waseScotland Yard u-Alan Grant. Elulama esibhedlela, uGrant uthola indlela yokubulala isithukuthezi sakhe lapho othile emcela ukuthi acabange ngesihloko esithokozisayo: qagela umlingiswa womunye umuntu ngokubukeka kwakhe kuphela. Futhi uGrant uzokhetha isithombe se- INkosi uRichard III, mhlawumbe ononya kunabo bonke emlandweni wase-United Kingdom, okwathi, ngokusho kwakhe, wayengenacala kuwo wonke amacala akhe.
Enye uhlu lwezincwadi zikaSherlock Holmes - A. Conan Doyle nabanye
Abanye bezinkulungwane zabathandi bomphenyi waphakade wase Baker Street kungenzeka bangalazi leli qiniso. Futhi ngabe ngu-Arthur lowo UConan Doyle ubhale ezinye izindaba zikaHolmes ezingafakiwe ohlwini lwezincwadi kuthiwani ngabo. Futhi kufakwe ezinye izindaba ze-apocrypha Abesifazane baseHolmesian nabo ngokwabo abayingxenye yohlu lwezincwadi ezahlukene.
Lapha sithola futhi umseshi odumile ehlikihla amahlombe nabanye abalingiswa basenganekwaneni njengoRaffles, Aleister Crowley, Nkosi Greystoke (eyaziwa kangcono njengeTarzan), iShadow noma U-Arsene Lupine.
Isisulu 2117 - UJussi Adler-Olsen
Futhi ekugcineni sesine icala elisha elivela eMnyangweni Q, kusukela ochungechungeni olusele into yomhlaba wonke kusuka ku-Danish Jussi Adler-Olsen. Iyatholakala kusuka ngoJulayi 8, futhi isihloko sesishiyagalombili Ifaka inkanyezi kumhloli ocasulayo njalo UCarl Mørck kanye nomsizi wakhe onomusa futhi onzima ngokwengeziwe I-Assad. Ngengqikimba eyisihloko ngokuphelele, le noveli yathola nombhali denmark abafundi umklomelo. Futhi lolu chungechunge lushicilelwe emazweni angaphezu kwamashumi amane nambili futhi lunabafundi abangaphezu kwezigidi eziyishumi nanhlanu.
Lesi sikhathi sisuka eCyprus siye eCopenhagen sidlula eBarcelona. Futhi kungukuthi ogwini lwase ECyprus sindisa i isidumbu sowesifazane kusuka eMiddle East, ngenkathi ku Barcelona, intatheli UJoan Aiguader Ucabanga ukuthi ubona ithuba lakhe lomsebenzi omkhulu lapho, embikweni wesibalo senani lababaleki abaminza olwandle, Owesifazane waseCyprus njengesisulu 2117.
Okwamanje, ku I-Copenhague, kwenzeka izenzakalo eziningana. Owokuqala, ukuthi omncane Alexander isinqumo uthole impindiselo ngenxa yokufa kwabantu abaningi ngokungafanele olwandle. Futhi ukudlala kweyakhe umdlalo wevidiyo uncanyelwe kuze kube Izinga le-2117, iqala ukubulala ngokungakhethi. Futhi kufayela le- Umnyango Q es I-Assad lowo okwathi, ngemuva kokubona isithombe salowo wesifazane ofile, uyaquleka ngoba wayemazi kahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Amanoveli ayi-6 anokuthinta okumnyama nokwesabekayo okukhethwe ngoJulayi
Amadodakazi esigodi sendwangu